Nickel chiwanikwa Bar, Cobalt chiwanikwa Bar, Stainless simbi, Titanium chiwanikwa Bar - Sekonic Metals Technology Co., Ltd.
Sekonic Metals Main inogadzira uye inopa Nickel yakavakirwa alloys bar uye tsvimbo senge Inconel bar, Monel bar, Hastelloy bar, Cobalt based alloys bar uye tsvimbo Senge, Haynes bar, Stellite mabara ect, uye Titanium alloy bar, Special Stainless simbi mabara. makore anopfuura makumi maviri.
Maumbirwo ebhawa: Flat bar, Round bar, Square bar, Hexagon bar
Pamusoro mamiriro: dema bhaa, yakapenya kana yakajeka bhaa
Divi: Chero saizi kubva pa1 / 5 inch kusvika 14 inch kana 6.0mm kusvika 350mm
Kureba: Random urefu, kana Cheka kureba mukati me6000mm
Kukura Kushivirira: H9, H10, H11, kana seyero uye zvibvumirano
Kuchenesa kupisa: Solution yakawedzerwa, zera rakaomarara, kufungidzira
Sekonic Metals Main inogadzira uye Kupa Inotevera Alloys Mabhawa
Nickel Yakavakirwa Alloys-Inconel Mabhawa
Inconel Mabhawa Zvikumbiro zveHeat Procssing stystem, Oiri neGesi, Vira reMuffles, jenareta jekiseni Ect. Aya maalloys akakodzera kuita mumidhiya yakanyanyisa. Pakudziyisa Inconel inokura inonamira oxide yakatetepa kuchengetedza nzvimbo yayo kubva pakurwiswa kwakanyanya.
Nickel Yakavakirwa Alloys-Incoloy Mabhawa
Iyo yakakwira simba Incoloybars inomira yakanyanya tembiricha maficha uko simbi nealuminium zvinokombamira kukambaira nekuda kwetemarimally yakagadzirwa kristaro matanda. Incoloy mabhawa anochengetedza kwavo mukurumari uye ngura kuramba pahupamhi hwepamusoro tembiricha miganho.
Nickel Yakavakirwa Alloys-Monel Mabhawa
Monel mabhaji ine simba rayo rakakwira uye nemhando yepamusoro yekumisa ngura inokodzera mashandiro egungwa nemaindasitiri
Nickel Yakavakirwa Alloys-Hastelloy Mabhawa
Hastelloy mabara anopa yakanaka ngura kuramba mune ine simba nharaunda, Senge dzakasungwa mamiriro enoverengeka emakemikari maitiro enharaunda. Indasitiri yekushandisa yemabhawa aya inosanganisira - oiri uye gasi, chinja kupisa, pulp nebepa, kemikari ect.
Nickel Yakavakirwa Alloys, Precsion Alloys, Special Stainless simbi Mabhawa, Titanium Alloy Mabhawa
Mamwe maSpecial Alloy Metails mabara mune Rakaumbwa rwekutenderera, tsvimbo, yakati sandara, mativi anowanikwa kukupa iwe nemutengo wakanaka, nekukurumidza kutumira.Tinogonawo kuburitsa mabara kemesitiri sekuenderana nevatengi zvinodiwa.
Bhaudhi & Nuts
Hastelloy / Inconel / invar / nyoro yemagineti Alloys / Titanium Alloys ect
Kupisa Kwakanyanya Zvitubu
Flanges & Zvinosunga
Unoda Kudzidza Zvakawanda kana kuwana quote?
Chiwanikwa R26 bhaudhi, Haynes 25 Waya, Welding waya, Stellite 6, stellite mhete, Stellite 6B,